सौरभले फर्पिङ घुमाउदै रक्षालाई ! - Purbeli News
सौरभले फर्पिङ घुमाउदै रक्षालाई !
प्रकाशित मिति: मंगलबार, आषाढ १९, २०७५ समय: १०:२७:३६
“भोली फेरी आउछु आउदिन, तिम्लाई भेट्न पाउछु पाउदिन” भन्दै नेपालबाट जापान प्रस्थान गरेका नव गायक नविन खतिवडाको “गाउँकी एउटी परी” नामक गित सार्वजनिक भएको छ । ईलामको सुर्योदय नगरपालिकामा जन्मिएर झापा बिर्तामोडलाई कर्मथलो बनाएका खतिवडा बिस्तारै बिस्तारै संगित क्षेत्रको भुमरीमा फसेका थिए । उनले यो भन्दा अगाडी पनि “एउटा गित” नामक भिडियो सार्वजनिक गरेका थिए । शिर्ष गित युट्युव लगायत सामाजिक संजालमा पनि निकै नि हिट लिष्टमा छ ।
जुन गितबाट दर्शक र श्रोताको मायाले अगाडी बढ्न हौसला मिलेको खतिवडाको भनाई छ । उनी थप्छन म संगितको भुमरीमा फसिसके अब यो भुमरीबाट निस्कन मुस्किल छ, आफ्नो करियर नै संगित प्रतिको लगावलाई निरन्तरता दिने समेत प्रष्टौति पारेका छन् । खतिवडाको भर्खरै मात्र सार्बजनिक भएको “गाउँकी एउटी परी” म्युजिक नेपाल मार्फत सार्बजनिक गरिएको हो । उक्त गितलाई युवा तथा अब्बल ठानिएका जिवन शाहीले निर्देशन गरेका हुन् । पछिल्लो समय उनी एक पछी अर्को गित निर्देशनमै व्यस्त भईरहेका छन् । गाउँकी परीमा भद्रगोलबाट निकै नै चर्चा कमाएकी अर्थात जिग्रीको गर्लफ्रेण्डको भुमिकामा देखिने मोडल रक्षा श्रेष्ठ यसपाली जिग्रीलाई झुक्याएर गाउँकी परिको रुपमा फर्पिङ गएर झापाका चर्चित मोडल सौरभ अधिकारीसंग रस्साकसी खेली रहेकको देख्न सकिन्छ ।
करिब २ बर्ष देखी संघर्षरत संगित क्षेत्रमा लागेका अधिकारी पछिल्लो समय एक दर्जन भन्दा बढी म्यूजिक भिडियोमा स्थापित कलाकारसंग अभिनय गरेर छुट्टै पहिचान बनाएर सहजै औलामा गन्न सकिने सफल कलाकार मानिन्छन । उनले स्वरुपराज आचार्यको हिन्दी गितमा समेत अभिनय गरिसकेका छन, उक्त गित रिलिजको तयारीमा रहेको सौरभले जानकारी दिए । गाउँकी परीलाई क्यामेरामा उत्सब दाहालले कैद गर्न कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् भने गितको शब्द, संगित गायक नबिन खतिवडाले नै गरेका हुन् । उक्त गित फर्पिङको बिभिन्न स्थानमा छाँयाङकन गरेको मोडल अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।